ဝဋ်ဆိုတာ . . .တစ်နေ့တော့ ပြန်လည်တတ်သည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ၀ဋ်ဆိုတာ . . .တစ်နေ့တော့ ပြန်လည်တတ်သည်
၀ဋ်ဆိုတာ . . .တစ်နေ့တော့ ပြန်လည်တတ်သည်
Posted by areno areno on Dec 1, 2012 in Creative Writing | 43 comments
လောကတွင် လူသားများသည်မိမိပြုလုပ်ခဲ့သောမကောင်းမှုများကို ပြန်လည်ခံစားရတတ်သောသဘော ရှိပါသည်။ မိမိပြုလုပ်ခဲ့သော
ကောင်းမှုမကောင်မှုများသည် မိမိထံတွင် အရိပ်သဖွယ် ပြန်လည် ခံစားရတတ်ပါသည်။ အချို ကိစ္စရပ်များတွင် မိမိပြုလုပ်ခဲ့သောမကောင်း
မှုများသည် အတိုးဖြင့်ပေးဆပ်ရခြင်းများလည်းရှိပါသည်။. နယူတန်၏နိယာမအရ သက်ရောက်မှုတိုင်းတွင် လာရာဘက်ဆန့်ကျင့်သောတန်
ပြန်သက်ရောက်မှုများရှိစမြဲဖြစ်သည်ကို လက်တွေလေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဗုဒ္ဒ္ဓဘာသာအရလည်း ဘုရာဟောတရားတွင် မိမိပြုလုပ်ခဲ့သော
ကောင်းမှုမကောင်းမှုများသည် မိမိထံအရိပ်သဖွယ်ပြန် ကျရောက်စေပါသည်။ စေတနာပါသောအလုပ်သည် ကံဖြစ်စေပါသည်။ကောင်းမှု
ကုသိုလ်များတွင် စေတနာပါသော အလုပ်သည်ကံဖြစ်စေကြောင်း ဘုရားဟောတရားများတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။မိမိမတရားပြုလုပ်ခဲ့
သောအလုပ်များသည်လည်း လောလာဆယ်တွင်၎င်း ၊နောင်သံသရာတွင် လည်းကောင် အရိပ်သဖွယ် လိုက်လာကပြန်လည်ပေးဆပ်
ရမည် ကို သံသယဖြစ်စရာမလို့ပေ၊ လော လောဆယ် လောကတွင် မတရားပြုလုပ်နေသူများ၊သူများအိမ်၊သူများရွာများကိုမတရားလို့
ချင် နေသူများ၊ မီးလောင်ဖျက်ဆီးနေသူများ၊လူသတ် နေသူများသည် တစ်နေ့တွင် ထိုကဲ့သို့ မိမိတို့၏ ဘ၀ ပေး အကျိုး၊အကုသိုလ်
အကျိးဆက်မျာကို ပြန်လည် ခံစားကြရမည်ကို တတ်သိနားလည်သူ များမှာ ဆုံးမကြရပေမည်။ ထို့ကဲ့သို့ဆိုဆုံးမမှုမရှိဘဲတတ်သိနား
လာသောအခါ လောကပါလတရားပျက်ယွင်းလာသောအခါ အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန် ကြုံတွေရမြဲဖြစ်သောသံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှာပင်
၀ဋ်ကြွေးပေးဆပ်ရသောအခါ မိမိတို့နိုင်ငံ၊မိမိတို့လူမျိုးသည် ဆိုးရွားလှသော အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိစေမည်ကိုလည်းပြန်လည်
သတိရသင့်ပါသည်။အမျိုးချစ်တတ်သူများ မိမိတို့မျိုးနွယ်ကောင်းမွန်အောင်တလွဲဆံပင် ကောင်းမနေဘဲ ဘုရားဟောတရားကို အလေးထား
သင့်ပါသည်။ထို့ကဲ့သို့ အသိတရားမရရှိပါက မိမိတို့သည်ပင်ပျက်စီခြင်းငါးပါးနှင့်ကြုံတွေကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။မှန်ရာကိုသိရှိခြင်းသည်ဝိဇ္ဖာဖြစ်
ပါသည်။ အမှန်တရားကိုမသိရှိခြင်းအ၀ိဇ္ဖာတရားများဖုံးလွမ်းပြီး၊လောဘမီး၊ဒေါသမီး များတောက်လောင်နေပါက အမှန်တရားများကိုမြင်နိုင်
မည်မဟုတ်ပါ၊ ငါဟူသောအစွဲ ၊ငါမှ ငါ သာအမြတ်ဆုံးဆိုသောအစွန်းရောက်အစွဲများသည် နိုင်ငံတော်တိုးတက်စေရေး၊မိမိတို့ဘ၀လွတ်မြောက်
စေရေး တရားများနှင့် လွဲချော်စေသောအဖျက်တရားများကို လွတ်ကင်းအောင်ရှောင်ကျဉ်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သူများပြောတိုင်း ယုံကြည်ခြင်း၊သူများမြောက်ပေးတိုင်း လိုက်လုပ်ခြင်းများသည် မိမိကိုယ်ကိုယ်ဥာဏ်ပညာမရှိသော၊ဆင်ခြင်တုံတရား
မရှိသောအကြောင်းအရာများဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ကွန်ပျူတာပညာတိုးတက်လာခြင်းနှင် အင်တာနက်စနစ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်း
တို့ကြောင့် သတင်းအမှားများဖြစ်စေ၊အမှန်များဖြစ်စေပျံနှံခြင်းမှာလွန်စွာ မြန်ဆန်လှပေသည်။ သို့သော် ယနေ့တောသူတောင်သားများ၊
၊အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသားများတွင်အင်တာနက်တွင်ပါလျှင် အမှန်ဆိုသော အတွေးအခေါ်များ၊facebookတွင်ပါလျှင်အမှန်ဆိုသောအတွေး
အခေါ်များ၊ဓါတ်ပုံမြင်ရလျှင်ပြုပြင်ထားလားမထားလားမသိဘဲစွတ်ယုံသောအတွေးများစသည့်ပညာမတတ်သောအတွေအခေါ်များ၊ဂျာနယ် တွင်ဖေါ်ပြလျှင်မှန်သည်ဟုသောအတွေးခေါ်များရှိရာမှန်သည်မမှန်သည်ကိုမတွေးတောနိုင်မစဉ်းစားတတ်ဘဲ သွေးထိုးမြောက်ပင့်ပေးမှုများဖြင့် ပဋိပက္ခများစွာဖြစ်ပွါးစေခဲ့ပါသည်။ သတင်းတစ်ခုကိုတွေလျှင် အမှန် အမှားကို ချင်ချိန်ပြီး သတင်းမှန်ကို ရွေးထုတ်ယူနိုင်ရမည်ဖြစ်ပါမှ အမှန်
တရားသတင်းများကိုတွေ့မြင် နိုင်ပါသည်။ ဘုရားဟောတရားတွင် ပင် ငါဟောကြားသည်ဆိုပြီးမဆန်းစစ်ဘဲယုံကြည်ခြင်းမပြုရန်ဆုံးမချက်များ
အခြားသော ဘာသာတရားများတွင် လည်း မကောင်းမှုသည်မိမိတို့ထံသို့ပြန်လည်ကျရောက်စေမည့်အကြောင်း ပါရှိပါသည်။ လောက
တွင် ဖြစ်စေ လောကုတ္တရာတွင်ဖြစ်စေပြန်လည်ပေးဆပ်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့တစ်နေပြုလုပ်ခဲ့မိသော အရာများတွင် ကောင်းမှုကုသိုလ်
၊မကောင်းမှု များမည်မျှ များပြားနေသည်ကို ချင့်ချိန် နိုင်ကြပြီး မိမိတို့ ကိုယ်ကိုယ် မိမိတို့သူံးသပ်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မိမိ နိုင်သည့်အတွက် ၊လူများသည့်အတွက်အားနည်းသူကို ဖိနှိပ်သတ်ဖြတ်ခဲ့လျှင် ၊အားနည်းသူများအသိုက်အမြုံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့လျှင်၊ မိမိတို့သည်လည်း လက်ရှိဘ၀တွင်တစ်နေ့နေ့၊တစ်ချိန်ချိန်တွင်ဖြစ်စေ ၊နောင်တစ်ဘ၀တွင်ဖြစ်စေပြန်လည်ပေးဆပ်ကြရမည်မှာ
လွှဲရှောင်လို့မရနိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ယခုဖြစ်စဉ်များတွင် မျက်ဝါးထင်ထင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေသည်။
ထဲမှာတော့နောက်ကလိုက်နေ့တဲ့ခွေးရဲ့စိတ်ထဲမှာယုန် ကိုမိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြစ်လိုက်မဲ့ဆိုတဲ့ (ယုန်)ကိုဘဲစိတ်စွဲနေပြီး ရှေ့ကအသက်လု့
တကယ့်တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန် ခွေကယုန်၊ ယုန်ကခွေးပြန်ဖြစ်တဲ့နေ့ . . . . . . . . . ။
အဲ့ဒီလို စေဒနာ ဗလပွနဲ့တင်ပေးတဲ့သူကို
စောက်ကြိုးနဲ ပစ္စလက်ခတ် ကျေးဇူးတင်ဘာဒယ်
ကိုယ်ကမကောင်းတာလုပ်ရင်.. မကောင်းတာပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ.. မယုံဘူးဗျ..
ကောင်းတာလုပ်ရင်.. ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်း.. မယုံပြန်ဘူးခင်ဗျ..။
ကောင်းတာဆိုတာဘာလည်း.. မကောင်းတာဆိုတာဘာလည်း.. မေးချင်မိတယ်..
ဒါတွေကို.. ဘယ်သူကပြောပြိး.. ဘယ်သူကဆုံးဖြတ်တာလည်း.။ ဘယ်လိုနှိုင်းရကိန်းလည်း..
ကိုယ့်အတွက်ကောင်းနေပေမယ့်.. တခြားသူအတွက်.. ကောင်းချင်မှကောင်းမှာကိုး..
သတ္တ၀ါတွေကို.. စီမံနေတာ.. ကံ..စိတ်..ဥတု..အဟာရလေးပါးပါတဲ့..။
ကာလံ..ဒေသံ..ပယောဂံကြည့်.. လုပ်သင့်..ရေးသင့်..ပြောသင့်..တွေးသင့်တယ်လို့.. ကိုယ်တိုင်ကိုယ်နှိုက်က.. ကိုယ့်ဘ၀အတွေ့အကြုံ..ပညာ..အရည်အချည်းနဲ့တွက်ချက်ပြီး.. လုပ်စရာရှိတာကို..ကံ..ဥာဏ်..၀ီရိယစိုက်.. လုပ်ကြ..ရေးကြ..ပြောကြ..တွေးကြစေလိုကြောင်း… ပါ..။
ဟိ ဟိ ပြောမှပြောပါ့မလားလို့ ခါတော်မှီရောက်လာပါပေါ့ အိုဘယ့် တို့သူကြီးးးးးးးး
မေးချင်တာက တခြား မေးဖြစ်တာက တလွဲတော့ ဖြစ်တော့မှာဘဲ။
သူကြီးပြောတဲ့ ငြင်းခုန်ခြင်း အနုပညာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး သူကြီးရဲ့ “စံ” တခုကိုသိချင်တာပေါ့ဗျာ။
သတ်မှတ်ချက် လို့အလွယ်ပြောလဲ ရပါတယ်။
ဆိုလိုတာက ငါးစိမ်းသယ်မ နှစ်ယောက် ထမိန် စွန်တောင်ဆွဲပြီးအပြန်အလှန်အော်ဟစ်နေရင်
ဘယ်လိုမှ ငြင်းခုန်ခြင်းအနုပညာ မဖြစ်နိုင်တော့ ဘူးလေ။ ကြမ်းတယ်မဟုတ်လားဗျာ။
နောက်တခုက ဘွဲ့ယူစာတမ်းတွေမှာ ဒဖန့်(စ)ထိုင်တဲ့အခါ ကျောင်းသားကဆရာတွေရဲ့ ထောက်ကွက်တွေ
ကိုငြင်းရတာရှိတယ်ဗျာ။ အဲဒီမှာလဲ အငြင်းမတတ်ရင်ဘွဲ့မရဘူးဗျ။ အဲဒီတော့ အနုပညာမဆန်ဘူးပေါ့ဗျာ။
အဲဒီတော့ ဘယ်လို အချက်တွေနဲ့ ငြင်းခုန်ခြင်းကို အနုပညာအရာသွင်းလို့ရမလဲ ဆိုတာမေးမလို့ပါ။
ဒုတိယမေးခွန်းကတော့ ခု သူကြီးရဲ့ကော်မန့်ကိုပါ။
စတိတ်မဲန့််လိုဘဲခေါ်ခေါ် ပရိုပိုဇယ်လို့ဘဲပြောပြော အဆိုတရပ်အပေါ်မှာ ကောင်း၏၊/မှန်၏
မဆုံးဖြတ်ခင်မှာ.. ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုပြောတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကျနော်မေးချင်လေ့ရှိပါတယ်။
1.သူကြီး ဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့် ခုလိုပြောရတာလဲ။
2. ဘယ်လို အထောက်အထားတွေကများ ခုလို မယုံဘူးဗျလို့ ပြောနိုင်တဲ့ စိတ် ကိုရလာတာလဲ။
အဲဒီအပေါ်က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အဆိုရဲ့ရှင်းလင်းချက်လေးကို သိချင်ရုံသက်သက်ပါ။
ခုလို သဘောမျိုး သူကြီး သွယ်ဝိုက်ပြောခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ ခုတခါ တည့်တည့်ကြီးပြောလို့
တခုသော အယူအဆတော့ အခိုင်အမာရှိမှာဘဲ လို့ ယူဆမိလို့ မေးရခြင်းပါ။
((ကာလံ..ဒေသံ..ပယောဂံကြည့်.. လုပ်သင့်..ရေးသင့်..ပြောသင့်..တွေးသင့်တယ်လို့.. ကိုယ်တိုင်ကိုယ်နှိုက်က.. ကိုယ့်ဘ၀အတွေ့အကြုံ..ပညာ..အရည်အချည်းနဲ့တွက်ချက်ပြီး.. လုပ်စရာရှိတာကို..ကံ..ဥာဏ်..၀ီရိယစိုက်.. လုပ်ကြ..ရေးကြ..ပြောကြ..တွေးကြစေလိုကြောင်း… ပါ..။
~~~~~~~~~~~~~~ဒါကိုတော့ မေးစရာမရှိပါဘူး၊ အိုကေပါတယ်))
သဂျီး အရက်မူးမှာကိုစောင့် ဆြာသစ်။ သူက မူးမူးနဲ့ပြောပီး အမူးပျယ်သွားရင် ဘာမှ မမှတ်မိဘူး။ မူးလာမှ သေရည်အရှိန်နဲ့ စိတ်ထင်ရာပြောတာ…။
မန္တလေးဂေဇက် ဇွန်လ ၂၀၁၁ – အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – kai
အဖြေတခုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်..။ ဖတ်ကြည့်ပြီး အဖြေတခုမရသေးရင် (စာဖတ်သူတွေအတွက်) ဆက်ဆွေးနွေးပေးစေလိုပါတယ်နော..။
နောက်မေးခွန်းတခုအတွက်..တတ်နိုင်သလောက်.. အမြင်တခုထား.. ဖြေကြည့်တာပါ…
အဲဒီမှာ.. strings attached လုပ်ထားပါတယ်..။
လူသားတဦးချင်းစီမှာရှိရမယ့်.. ပေးထားတဲ့.. စည်းဘောင် Rights တွေကျော်သုံး.. သူတပါးကို.. ကန့်သတ်ထိမ်းချုပ်ထားတယ်လို့.. ကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်..။
ကိုယ်ကကောင်းတာလုပ်တာ.. သူများကောင်းချင်ကောင်းမယ်.. မကောင်းချင်မကောင်းဘူးလေ…
“ကောင်းတာ/မကောင်းတာလုပ်ရင်.. ကောင်းတာ/မကောင်းတာဖြစ်မယ်”ဆိုပြီး.. ချုပ်လိုက်ပါတယ်..။
အဲဒီအကျိုးကြောင့်. အကြောင်းတရားတခုမဖြစ်ဖြစ်အောင်.. “၀ဋ်ဆိုတာလည်တယ်”ဆိုပြီး.. ထပ်ချုပ်ပါတယ်..
ဒါလည်းမသေချာသေးသမို့.. နောင်ဘ၀,ဘ၀ဆိုတာတွေကို.. စိတ်ထဲကဖန်တီး.. အဲဒီဘ၀,ဘ၀တွေအထိ ၀ဋ်ဆိုတာကြီးနဲ့.. ပို့ပြီး.. ကိုယ်လိုရာကိုယ်ဆွဲပြော/တွေးပါတော့တယ်..။
ဒီစကားမှာ.. သူတပါးရဲ့အလိုဆန္ဒ..ဖြစ်တည်မှု.. Rights ကို အသိအမှတ်မပြုပါဘူး..
လူသားဆိုတာ.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင်.. အစိုးမရတာ.. ဘယ်နှယ်.. သူများ Rights တွေကိုကျူုးကျော်ပြီး..” ဖြစ်ရမယ်”လုပ်နေနိုင်သလည်း.. တွေးမိပါတယ်.။
(.. ကိုယ်တခုခု”လှုပ်”လိုက်တာနဲ့.. ဒီလောကမှာ… ဖြစ်သွားနိုင်ခြေတွေအကြောင်း.. တခါက.. ခေးအော့သီအိုရီနဲ့ ရှင်းရေးပါဖူးပါတယ်နော..)
လက်တွေ့မျက်မြင်အရလည်း..(နောက်နောင်ဘ၀အထိ. စောင့်ရန်မလို) ကိုယ်ကကောင်းအောင်ဆိုပြီးလုပ်တာ.. သူတပါးဆိုးသွားတာတွေ..
သူက.. သူကောင်းအောင်လုပ်နေတာ.. ကိုယ်ကဆိုးနေတာတွေ.. အများကြီးမြင်နိုင်ပါမယ်..။
ဒါကတော့.. မူလပို့စ်ရှင်ရေးတာနဲ့.. သွေဖယ်မသွားအောင်… ဆက်စပ်ရေးတာပါ..။
ယူအက်စ်..အာရီဇိုးနားပြည်နယ်မှာ.. ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေက.. မက်ခ်ဆီကိုကခိုးဝင်လာသူတွေကို ကင်န်ပိန်းလုပ်ပြီး.. အလုပ်တွေကုမ္ပဏီတွေ.. အိမ်တွေထဲအထိ လိုက်ဆွဲပါတယ်..။
သူ့ပြည်နယ်သားတွေ အလုပ်အကိုင်တွေအလုခံရပြီး.. ရာဇ၀တ်မှုဖြစ်နှုန်းတက်လာတာကြောင့်.. သူ့ပြည်နယ်သားတွေကောင်းအောင်လုပ်တာပါ..။
ခိုးဝင်အခြေချနေသူတွေ.. သိန်းချီ မူလလာရာနိုင်ငံပြန်အပို့ခံရပါတယ်..။
မိသားစုတွေကွဲပါတယ်..။ ကလေးတွေမိခင်ဖခင်နဲ့ကွဲပါတယ်..။ တချို့တွေ အခြေချပြီးဖြစ်နေတဲ့.. အိုးအိမ်.စည်းစိမ်အကုန်ဆုံးရှုံးပါတယ်..။
အဲဒီ ခိုးဝင်လာသူတွေ (illegal immigrant)အတွက် မကောင်းပါ..။
ခိုးဝင်အခြေချသူတွေကို ကူညီတဲ့အမေရိကန်တွေလည်း.. အေ၇းယူခံရပါတယ်..။
အမေရိကားမြေမှာ.illegal immigrant စုံတွဲကနေ. ကလေးမွေးဖြစ်သွားတဲ့ တွေရှိပါတယ်..
အဲဒီကလေးတွေဟာ..US Citizen တွေအလိုလိုဖြစ်ပါတယ်..။
အဲဒီကလေး အသက်၂၀ပြည့်ချိန်မှာ..နှင်ထုတ်ခံထားရတဲ့ မိဘတွေကို. ဂရင်းကဒ်လျှောက်ပေးပြီး… ပြန်ခေါ်လို့ရပါတယ်..။
SMITH: Obama puts illegals ahead of Americans – Washington Times
Sep 26, 2012 – … on track to deportarecord number of illegal immigrants this year. … in its year-end deportation statistics more than 100,000 removals froma…
Sep 7, 2012 – Immigration enforcement authorities detained and deported record numbers of illegal immigrants in 2011 and are on track for … people during the 2011 fiscal year, the department’s Office of Immigration Statistics reported.
တရားမဝင် အလုပ်သမားအဖြစ် ခိုးဝင်ခိုးထွက်လုပ်စဉ်က အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြီး တရားဝင်မှုလည်းပေးရော ကောင်းသွားတာ စနစ်ပြင်လိုက်လို့လား လူပြင်လိုက်လို့လား ပြစ်ဆုတ်ပျံသဂျီး။။။ လူတွေကိုတော့ တစစီဖြုတ် မလဲတန်ကောင်းပါရဲ့… :harr:
မှတ်မိတာပေါ့ သဂျီးရယ် အဲဒီခေးအော့ သီအိုရီကြီးကို …!
ကျုပ်ချောင်းဆိုးလို့နယူးယောက်မြို့ ကြီးရေကြီးပါတယ်ဆိုပြီး
ဒါပေမဲ့  …….မငြင်းသေးပါဘူးသဂျီးရယ် ဟဲဟဲ
သူကြီး ညွှန်းဆိုတဲ့ ပို့စ်မှာ ကျနော် ဆက်လက်ဆွေးနွေး သွား ပါ့မယ်။
ငါ ဝမ်းမနည်းတတ်ပါဘူး …
တကယ်ဆို ကျေနပ်စရာပါ ….
ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ သိထားပါ …
ဝဋ်ဆိုတာ လည်တတ်တယ် … တဲ့ကွာ …………။
ဆိုင်လား .. မဆိုင်လား တော့ မသိဘူး …
ဝဋ်ဆိုလို့ ကျုပ်သိတဲ့ ဝဋ်အကြောင်းကို ပြောလိုက်တယ် ..
ကျွန်တော်က ဗုဒ္ဓဘာသာပါ။ တကယ်လည်းယုံကြည်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာသာမဲ့ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ သူကြီးရဲ့ အယူအဆကိုတော့ ကြိုက်သဗျ။ အင်း..၀ဋ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိ သေသေချာချာမသိပဲ ပို့စ်တင်ပြီး ရှင်းပြနေတာကတော့ ကိုယ်ပိုင်ထွင်ထားတဲ့ “ကိုယ်ပိုင်ဝဋ်” သာဖြစ်လိမ့်မယ်။ အရေးထဲ ၀ဋ် နဲ့များလာခြောက် နေရသေးတယ်။ တော်တော်လေ့လာထားတယ်နော်..မြန်မာတွေ ၀ဋ်လည်မှာ ကြောက်တာ..
ဟုတ်တယ်ဗျာ၊ ဝဋ်ဆိုတာ ကြောင်းစရာဂျီးဗျို့…။ အသိတရားရှိ ကိုယ်ဂျင်းစားကြပါ။ ဒုက္ခရောက်သူအတွက် စာနာကြပါ၊ သူတို့ကို အကြောင်းပြု အမြတ်ထုတ်တာ ရှက်ရကောင်းမှန်း သိမှ ကိုယ်စီးတဲ့နွား အထီးအမမှန်း သိဂျပါမည်။
ဟာလဝါ ဦးကြောင်ကြီး ၇၈၇ (ဘိုးအင်းဂျမ်ဘိုဂျက်)
အီရန် ငလျင်ဘေးသင့်ရာ နေအိမ်များ။ (၀၈၊ ၁၁၊ ၂၀၁၂။)
အီရန်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းက Tabriz မြို့နားမှာ ငလျင်နှစ်ခု မိနစ်ပိုင်းပဲခြားပြီး လှုပ်သွားခဲ့တာမို့ လူ (၁၈၀) သေဆုံးသွားတယ်လို့ အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။ လူပေါင်း (၁၃၀၀) လောက်လည်း ဒဏ်ရာရသွားကြပါတယ်။
အနည်းဆုံး ကျေးရွာ (၆) ရွာလည်း လုံးဝပြားချပ်သွားပြီး နောက်ထပ် ကျေးရွာ (၆၀) လောက်က ၅၀% ကနေ ၈၀% လောက်ထိ ထိခိုက် ပျက်ဆီးသွားတယ်လို့ အစိုးရ ရုပ်မြင်သံကြားဌာနက ကြေညာပါ တယ်။ ဒီငလျင်တွေ ပြင်းအား ဘယ်လောက်စီရှိကြလဲဆိုတာမှာတော့ တိုင်းတာချက်တွေက နည်းနည်း ကွာခြားနေပေမယ့် ပြင်းအား ၆ (ဒါမှမဟုတ်) ၆ အထက်မှာရှိကြတယ်လို့ Tehran တက္ကသိုလ်ရော အမေရိကန် ဘူမိဗေဒ တိုင်းထွာရေးဌာနကပါ ပြောပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်တွေလည်း လှုပ်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ်လည်း ထပ်လှုပ်မှာစိုးရိမ်လို့ လူတွေ ညဘက် အိမ်အပြင်မှာပဲနေကြဖို့ အရာရှိတွေက နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ အီရန်နိုင်ငံမှာက ငလျင် မကြာခဏ လှုပ်လေ့ရှိပေမယ့် ငလျင်ပြင်းပြင်းလှုပ်တာကတော့ ရှားပါတယ်ရှင်။
” ဟာလဝါ ဦးကြောင်ကြီး ၇၈၇ (ဘိုးအင်းဂျမ်ဘိုဂျက်) ”
ဦးကြောင် ရေ ။
Boeing 787 က Dreamliner ပါ ။
Jumbo Jet ဆိုတာက Boeing 747 ကို ခေါ်တာပါ ။
အဲ ၊ ကိုယ့်နာမည် ကိုယ့်ဖာသာ ပေးတာ ဆိုရင်တော့ ၊
ဝင် ရှုပ်မိတဲ့ အတွက် Sorry ပါ ။
နီးရာ နံပါတ်ကို တမင် ယူထားတာ ထင်ပါရဲ့ ကိုအဘဖောရယ်။
ဂျူးတွေက အရှေ့ အလယ်ပိုင်း ကို ပြတ်ပြတ်သားသား သိမ်းပိုက်တော့မည်ဖြစ်သည် ။ ထို့ နောက် အီရန် ကို အမှည့်ခြွေ ခြွေမည် ။ နောက်အနှစ် ၂၀ ကြာလျှင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အစွန်းရောက်တတ်သည့် လူမျိုးကြီးတစ်ခု လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမည်
နောက်အနှစ် ၂၀ ကြာလျှင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အစွန်းရောက်တတ်သည့် လူမျိုးကြီးတစ်ခု လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမည်။ ဆိုတော့ကာ မြန်မာနိုင်ငံမှာကော အစွန်းရောက်တတ်သည့်
အများကောင်းကျိုးထက် မိမိကောင်းကျိုးကိုသာ ဦးစားပေးတတ်သည့် လူတစ်စု ဘယ်တော့လောက်မှာ
ပျောက်ကွယ် သွားလောက်မလဲ ဒါလေးကိုသိသူကဖြေကြားစေလိုပါတယ်။
သူ့မလဲ ဘယ်က ဘယ်လို ပေါ်လာ ပါလိမ့်။
အရီနိုမုတ်ဆိတ် လုပ်စမ်းပါအုံးကွ ဝဋ်အကြောင်း ဘာကြောင်းညာကြောင်း… ပြောတုံးကပြောပြီး နင့်အမျိုးတွေဆီမှာ ငလျင်လှုပ်တယ်ဆိုရော ကြောက်တတ်လိုက်တာ အသံကိုမထွက်တော့ဘူး…။
မောင်ကြောင်ကြီးရေ ကိုယ်သိတာက ချေးချောက်ရေနူးတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးကွကိုယ်သိသလောက်အခုငလျှင် မှာ-
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၇) နာရီ၊ (၂၆)မိနစ်၊ (၂၀)စက္ကန့်အချိန်တွင် မန္တလေးမြေငလျင်စခန်းမှ မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက် ၅၅ မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်း (ရွှေဘိုမြို့၏ မြောက်ဘက် (၁၅)မိုင်ခန့်အကွာ)ကို ဗဟိုပြု၍ အင်အားရစ်(ခ်ျ)တာစကေး (၅.၈)အဆင့်ရှိ နောက်ဆက်တွဲ အင်အားအသင့်အတင့်ရှိသော မြေငလျင်တစ်ခု လှုပ်ရှားသွားကြောင်း မိုးဇလက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့။
ခင်ဦးမြို့နယ် ကဘွက်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် (၂)ထပ် ဘုန်းတော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်း ပြိုကျခဲ့ရာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး (ဘွဲ့၊ သက်တော်၊ ၀ါတော်၊)စိစစ်ဆဲမှာ ဦးခေါင်းပေါက်ပြဲ ဒဏ်ရာ (မစိုးရိမ်ရ) ရရှိခဲ့။
ဝက်လက်မြို့တွင် သစ်ဆိပ်ကျေးရွာဘုရား ငှက်ပျောဖူးမှစ၍ ပြိုကျခြင်း၊ ရေလည်မှော် မူလတန်းကျောင်း နံရံပြိုကျခြင်း၊
ရေလည်မှော်ကျေးရွာ ဘုရားစိန်ဖူးတော် မြေခခြင်း၊
ရွာသာကြီးကျေးရွာ ဘုရားစိန်ဖူး တော် မြေခခြင်းနှင့် အင်းမဲကြီးကျေးရွာ ဘုရားစိန်ဖူးတော် မြေခခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
မိုးညှင်းမြို့ ရွှေသာလျောင်း ဘုရားကြီး ဝန်းအတွင်းရှိ ဂန္ဓကုဋီတိုက် မျက်နှာစာ အခန်း(၃)ခန်းရှိ နံရံနှင့် အုတ်တိုင်အချို့ အက်ကွဲခဲ့ကြောင်း ။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမရပူရမြို့နယ်ရှိ စွယ်တော်မြတ် စေတီ(မန္တလေး) စိန်ဖူးတော်သည် အလယ်ပစ္စယံပေါ်သို့ ပြုတ်ကျခဲ့။
ရှင်မာလဲဘုရား ဓမ္မာရုံရှိ အင်္ဂတေပန်းများနှင့် အနောက်ဘက်မျက်နှာစာရှိ ခြင်သေ့ရုပ်တုတစ်ခုပြိုကျခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ငလျှင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်
မြစ်သား-မြင်းခြံလမ်းပိုင်းရှိ ကင်းစိန်ဈေးအရှေ့ရွာ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း၊
မန္တလေးမြို့တွင် သစ်မင်းရာဇာ ကုမ္ပဏီ (၅) ခန်းတွဲ (၂) ထပ်မှ (၂) ထပ် (၁) ခန်း ပြိုကျခြင်း၊ ကံလှဓမ္မာရုံ ပြသာဒ် ပျက်စီးခြင်း၊ ဦးရွှေရိုး ဘုရားကြီး ဇောင်းတန်း အနောက်ဘက် အုတ်နံရံ အက်ကွဲခြင်း၊ ရွှေဘုန်းရှိန်ရပ်မှ (၂)ထပ် တိုက် အိမ် (၁)လုံး အက်ကွဲခြင်း၊ အမှတ်(၇)ရဲစခန်း အနောက်ဘက် အုတ်တံတိုင်း ပေ(၇ဝ) ခန့် ပြိုကျ ပျက်စီးခဲ့ခြင်း၊
နန်းဦးစေတီ အရှေ့ဘက် မုဒ် ပြသာဒ် အလျား (၈)ပေခန့် ပြိုကျခဲ့ခြင်း၊ အောင်မြေ ရွှေဘုံဘုရား စိန်ဖူးတော် မြေခခြင်း၊ ရွှေလင်းပင်ဘုရား သံထီးတော်ယိုင်ခြင်း၊ ကျောက်တော်ကြီးဘုရား အရှေ့မုဒ်ဦး တိုင်ကျိုး၍ မျက်နှာကျက် အက်ကွဲခြင်း၊ ရွှေဂူကြီးဘုရား အရန်စေတီငယ် တစ်ဆူ၏ ထီးတော် မြေခခြင်း၊ ရွှေဘုံသာဘုရား စိန်ဖူးတော်မြေခခြင်း၊ ငွေအိုးရဘုရား ပြသာဒ်ပြုတ်ကျခြင်း၊ မကျည်းကိုင်း မူလတန်းကျောင်း အုတ်နံရံ အက်ကွဲခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ။
အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ ဒေါနဘွားရပ်ကွက်ရှိ စန္ဒာမုနိဘုရားနှင့် ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ ဘနွဲ့ရွာ ဝေဇယန္တာကျောင်းရှိ အောင်တော်မူဘုရားမှ စိန်ဖူးတော် များမြေခခဲ့။
အမရပူရမြို့ပေါ်ရှိ ပုထိုးတော်ကြီးစေတီ၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ ဥပုသ်တော်ရပ်ကွက်၊ အမှတ် ၃၈ ရှိလေးမျက်နှာစေတီနှင့် အမရဌာနနီ အရှေ့ ရပ်ကွက်၊ အကွက် ၃၁ ရှိ အရိပ်မထွက်ဘုရားတို့မှ စိန်ဖူးတော်များမြေခခဲ့ရသည်။ ထို့ပြင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမရပူရမြို့နယ်ရှိ စွယ်တော်မြတ် စေတီ(မန္တလေး)စိန်ဖူးတော်သည် အလယ်ပစ္စယံပေါ်သို့ ပြုတ်ကျခဲ့သည်။
ရွှေဘိုမြို့ အမှတ် ၅ ရပ်ကွက် ရွှေပေါ်ကျွန်းဘုရား အနည်းငယ် ပြိုကျ ပျက်စီးခဲ့ပြီး အနောက်ဈေးရပ်ကွက်ရှိလောကမာရဇိန် ဘုရားစောင်းတန်း ပျက်စီးမှုလည်း ရှိခဲ့သည်။
စဥ့်ကူးမြို့နယ်တွင် ရွှေဂူကြီးဘုရား မုခ်ဦးတစ်ခြမ်း ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပြီး ယင်းရှိ အခြေခံ မူလတန်းကျောင်း ရှိကျောင်းဆောင်တဆောင် ပြိုကျပြီး အုတ်တံတိုင်းပေ ၃၀၀ ခန့် ပြိုကျခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင်ရွှေကြက်ယက်တောင်ဘုရား တံခွန်တိုင်နှင့်မုခ်ဦး၊ တောရကျောင်းတိုက်ရှိ အုတ်တံတိုင်း ၅ ခန်း၊ ပရိယတ္တိ သတ္တမ ၀ံသနန္ဒာကျောင်းတိုက်ရှိ အုတ်တံတိုင်းပေ ၆၀၀ ခန့် ၊ ရွှေယက်တောင်ဘုရားရှိ တံခွန်တိုင်နှင့်မုခ်ဦးလည်း ပြိုကျခဲ့သေးသည်။ အမှတ်၂ ရပ်ကွက်ရှိ နေအိမ် တစ်လုံးပြိုကျပြီး လူ ၃ဦးဒဏ်ရာရခဲ့သေးကြောင်း သိရသည်။
စဥ့်ကူး ဒေသခံများ၏ ပြောဆိုချက်များအရလည်း ။စဥ့်ကူးတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့် စာသင်ကျောင်းများ အက်ကွဲပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ကျည်တောက်ပေါက် စားသောက်ဆိုင် ပြိုကျရာ လူ ၂ဦးသေဆုံးပြီး နွယ်ရုံကျေးရွာတွင်လည်း တံတိုင်းတခု ပြိုရာတွင် ၁ ဦး သေဆုံးကြောင်း သိရသည်
မြေငလျှင်အင်အားပြင်းထန်မှုကြောင့် ရွှေဘို၊ ခင်ဦး၊ ရေဦး၊ တန့်ဆည်၊ ဇီးကုန်း၊ ကန့်ဘလူ၊ မုံရွာ၊ စစ်ကိုင်း၊မန္တလေး၊ မိုးကုတ်ရှိ နေအိမ်များ ပြိုကျ အက်ကွဲခဲ့ရပြီး စေတီပုထိုး အပြိုအပျက်များလည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
မူလတန်းေ ကျာင်းဆောင် တစ်လုံး ပြိုကျ၊ ရှေး ဟောင်းစေတီ(၁၀)ဆူ ပြိုကျ၊
ဘုန်းကြီး ကျောင်းဆောင်(၇)လုံး ပြိုကျ၊ အုတ်တံတိုင်း အမြောက်
ရေရှင်ကျေးရွာ အတွင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း စေတီ(၁)ဆူ ပြိုကျ။
သပြေသာရွာ အတွင်း ရှေးဟောင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ဆောင်ပြိုကျပျက်စီး။
ထန်းတပင်ရွာ အတွင်း ရွာလည်ဘုရားစေတီ ထီးတော်မြေခ။
ပရိယတ္တိသတ္တမ၀ံသနန္ဒာကျောင်းတိုက်ရှိ အုတ်တံတိုင်းပေ ၆၀၀ ခန့်ပြိုကျ။
ငလျင် ဒဏ်ကြောင့် ရွှေဘိုမြို့နှင့် ၁၇ မိုင်အကွာရှိ ဆောက်လုပ်ဆဲ ရတနာသိင်္ခ တံတား ပြိုကျ ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပွားပြီး ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သား နှစ်ဦး သေဆုံးကာ ငါးဦး ပျောက်ဆုံး နေကြောင်း အဆိုပါ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်မှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။ တံတား ပြိုကျမှုကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သား ၁၅ဦး ဧရာဝတီ မြစ်ထဲ မျောပါခဲ့ပါသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ယနေ့ (နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့) နံနက်ပိုင်းက လှုပ်ခတ်ခဲ့သော အင်အားပြင်း ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် စဉ့်ကူး မြို့နယ် ကန်တောင် ကျေးရွာ အနီးရှိ ရွှေတွင်း တစ်ခု ပြိုကျပြီး ရွှေလုပ်သား ၁၁ ဦး ပိတ်မိနေကြောင်း ရွှေလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက ဆက်သွယ် ပြောကြားသည်။ ” ငလျင်လှုပ်တော့ အလုပ်သမားတွေ မေ့မျော ကုန်တယ်။ ပြီးတော့ ပြိုကျလာတော့ အကုန် ပိတ်မိသွားတယ်။
ယနေ့ညနေ ၅နာရီ ၂၅မိနစ် တွင် မန္တလေး၌ ငလျင်ထပ်မံ လှုပ်ခတ်သွားကြောင်း မန္တလေးမြို့ ခံ တဦးက ပြောပါတယ်။
သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်မှာ အသေအပျောက်များတယ်လို့ ဖုန်းသတင်းရရှိပါတယ်။ ရတနာသီဟ ကားတစ်စင်းဆိုရင် ငလျင်ကြောမိပြီး မှောက်သွားတာ လူ၆ယောက် သေသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ သပိတ်ကျင်းအချုပ်ခန်းထဲက လူတွေလည်းမြေပြိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။
ငလျင် ဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးပြိုကျ သွားသော ရတနာသိင်္ခ တံတားစီမံကိန်း သို့ နိုင်ငံတော် ဒုတိယ သမ္မတ လာရောက်နေစဉ် ငလျင် ထပ်မံလှုပ်ခတ် သဖြင့် ယင်းစီမံ ကိန်းသို့ မလာတော့ဘဲ လှည့်ပြန် သွားခဲ့ကြောင်း
ရွှေဘိုခရိုင် ကျောက်မြောင်း မြို့နယ်ခွဲဒေသ အနီးတစ်ဝိုက် နွယ်ငြိမ်းကျေးရွာ၊ မလားကျေးရွာ၊ မခေါက်ကျေးရွာ တို့တွင် နိုဝင်ဘာလ(၁၁)ရက်က
ငလျှင်ဒဏ်ကြောင့် လူတွေ မတ်တပ်မရပ်နိုင်ပဲ ထိုင်နေကြရတယ် ၊မီးလည်း ပျက်သွားတယ်လို့ ငါးဇွန်မြို့ ခံက ပြောပါတယ်။
လောလောဆယ် စုံစမ်းသိရှိရ သလောက် ကတော့ မန္တလေးနဲ့ ပြင်ဦးလွင် မြို့ တွေ အပါအ၀င် အထက်မြန်မာပြည် မြို့ တော်တော်များများမှာ ငလျှင်လှုပ်ခတ်မှု ဒဏ်ကို ခံစားသိရှိရကြောင်း
ယင်းမြေငလျှင်မှာ မန္တလေးမြေငလျှင်စခန်း မှ မြောက်ဘက် ၈၂မိုင်ခန့်အကွာ မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်း ရွှေဘိုမြို့မြောက်ဘက် ၄၅မိုင်ခန့်အကွာ ဗဟိုပြုပြီး အင်အားပြင်းထန် အဆင့် ၆.၈ ရစ်စကေး လှုပ်ခတ်သွားပြီးယင်းငလျှင်သည် စစ်ကိုင်းပြတ်ရွှေ့ကြောပေါ်တွင် လှုပ်ခတ်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော်မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒဦးစီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။
ငလျှင်ကြောင့် ကျောက်မြောင်းနှင့် စဥ့်ကူးဆက်နွယ်သော ရတနာသိင်္ခ ဧရာဝတီမြစ်ကူးတံတား တိုင်အမှတ်MP2နှင့် MP3 ဆောက်လက်စ ငြမ်းများပြိုကျပြီး လုပ်သား၂ ဦး (အရပ်သားတဦး၊ ဝန်ထမ်းတဦး)သေဆုံးပြီး ၁၆ဦး ဒဏ်ရာရကာ ၅ဦး ပျောက်ဆုံးလျှက် ရှိကြောင်း
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ဆောင်နေသော သဘောင်္နှစ်စင်းလည်းရေထဲသို့ မြှပ်သွားကြောင်း
သိရသည်။ယင်းသဘောင်္ကို ပြန်လည်ဆည်ယူရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်းသိရသည်။
မန္တလေးမြို့ ၌လည်း မန်းမြန်မာပလာဇာတွင် အက်ကွဲပျက်စီးမှုများရှိပြီး လျှောက်လမ်းခင်းကြွေပြားများအက်ကွဲခဲ့သည်။ ၂၅လမ်း၊ ၃၅လမ်းထောင့်ရှိ တိုက်တခြမ်း ပြိုကျခဲ့သော်လည်း လူအထိအခိုက် မရှိကြောင်းသိရသည်။ သို့သော်လည်း ၂၃လမ်းဘက်ရှိ နေအိမ်တွင် လေဖြတ်ဝေဒနာခံစားပြီး အိပ်ယာထဲ လှဲနေရသောအသက် ၆၀ ၀န်းကျင်ရှိ အမျိုးသမီးတဦးမှာ သွေးလန့်သေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။
နောက်ဆုံးရရှိသော သတင်းများအရ ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိသော အရေအတွက်ကို အခြေခံပြီး သေဆုံးသူ ၁၃ ဦး၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ ၄၀ ဦး ရှိကြောင်း
areno areno ရယ် သေတာတွေကြေဒါတွေက ကမ္ဘာနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ဘာIC ဆိုလား (အိုပါ iron cross ကိုပြောထှါပါ) အဲဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်နေတာတွေက ပိုများပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခုတောင် ဘာ..brother နဲ့ မဘရားသားချင်တဲ့လူတွေနဲ့ အချင်းချင်းချနေကြပြီ။ နောက်ပြီး အကြမ်းဖျင်းရေးပြရင်ရပါတယ်ဗျ။ သူညားဆီကကူးချရင်တော့ အညွှန်းလေးထည့်ပေးသင့်တယ်နော။ ကျုပ်တို့က သူများဘာသာဖြစ်ရင် ၀မ်းမသာပါဘူးဗျ။ သူ့အကြောင်းနဲ့သူသေချင်ရင်သေမှာပဲ။ ကူသင့်ရင်ကူရမှာပဲ။ လူသားအချင်းချင်းပဲဟာ။ အဲ..ဒါပေသိ..အစွန်းရောက်ဆိုရင်တော့..ဟဲဟဲ။သိတယ်မို့လား ကြောက်လွန်လွန်းလို့ပါဂျာ။ စိတ်ထဲပါလို့တော့မဟုတ်ဘူး။ ရွာထဲကျားဝင်လာလို့မှ ပြေးရင်ပြေး၊ မပြေးရင်တော့ တစ်နည်းနည်းနဲ့ ပြန်ခုခံရမှာပဲလေ။(ကျုပ်ဆိုရင်တော့ပြေးမှာဗျ..ဟဲဟဲ)။ မဆိုင်တဲ့လူတွေ ဒုက္ခရောက်တာကို ၀ဋ်လို့ပြောတာကတော့ ခင်ဗျား အောက်တန်းကျလွန်းပါတယ်။(လက်ပံတောင်းတောင်ကမီးရှို့တဲ့သူတွေနဲ့ အမျိုးတော်တယ်ထင်တယ်နော်။ဘင်္ဂလားမောင်နှမလားဟင်?)။ ခင်ဗျားကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာက အဲသလို မသင်ပေးလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ သဟာကြောင့် ဤအရာကို ကိုယ်ပိုင် ၀ဋ်ဟုခေါ်မည်။ခင်ဗျားဖော်ပြတဲ့ စာရင်းထဲမှာ ရခိုင်တွေလည်း တစ်ယောက်မှ ပါဘူးနော်? အော်..အင်းပေါ့လေ..သူတို့က ဟိုလိမ်ဂျာ တွေရဲ့ဝဋ်ခံနေရတာကိုး..သွပ်သွပ်။
လောကရဲ့ အမှန်တရား ဟာ တစ်ခုထဲ ရှိပါတယ်။
အဲဒါကို မြင်နိုင်ရက်နဲ့ ကျွန်မတို့ မမြင်နိုင်ဘဲ အစွဲတွေ စွဲ နေကြတာ မြဲ လို့လား?
သေလွန်ပြီး နောက်မှာမှ ဖြစ်လာမဲ့ အဖြစ်အပျက် တွေ က တကယ်ဘဲ မှန်မှာ မို့လား?
ဘယ်သူမှ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် သက်သေမပြနိုင်ပါဘူး။
ဒီတော့ ကိုယ့်လက်တွေ့ကြုံ နေရတဲ့ ဖြစ်ပြီးရင် ပျက်သွားတဲ့ သဘောလေးကို မြင်ပြီး ဖြစ်လာတဲ့ ခဏမှာ စိတ်ကို မှန်အောင်ထားပြီး မာန်တက်တာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ လူလူချင်း အမုန်းပွါးတာ စတဲ့ အကုသိုလ်တွေ ကင်းနိုင်သ၍ ကင်းဖို့သာလိုပါမယ်။
ဘာသာအစွဲတွေ ဖျောက်ပြီး အမှန်တရားကို မြင်ဖို့ ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ချင်းစာတရား ကို ထားတတ်နိုင်တဲ့ တစ်နေ့ သူများကို ထားတဲ့ အမုန်းတရားတွေ လျှော့သွားနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီလို တွေးနိုင်ဖို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မှ မဟုတ်ပါ။
စိတ်ထားကောင်း သူ ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိသူ ဘယ်ဘာသာဝင်မဆို ထားလို့ ရတဲ့ စိတ်ပါ။
သဘာဝ တရား က ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အန္တရာယ်တွေ က ဒီနေ့ခေတ်မှာ ပိုပို ပြီး ဆိုးလာပါတယ်။
ဘာသာရေး နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါ။
လူတွေရဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ဘယ်လောက် ဂရုစိုက် သလဲ ပေါ် မူတည်ပြီး ရာသီတွေ ကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်း ဖြစ်ရတာ ရှင်းရှင်းလေးပါ။
မြန်မာပြည်မှာ လဲ တောတောင် မရှိလောက်အောင် ကို ပြုန်းနေမှတော့ ဒီလို သဘာဝ ဘေးတွေ ဖြစ်လာတာ မဆန်းပါဘူး။
ဒါကို တလွဲ မကောက်စေလိုပါ။
ရှင်လဲ မြန်မာ့ ရေမြေမှာ နေပြီး မြန်မာပြည် နဲ့ မှီတင်းနေထိုင်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာကို ကိုယ်လိုရာတွေးပြီး မပြောသင့်ပါဘူး။
လောလောဆယ်မှာတော့ သူများဘာသာ အယူအဆ ကို မဝေဖန်လိုပေမဲ့
မနေ့တစ်နေ့ကဘဲ အာဖကန်နစ်စတန်မှာ လက်ထပ်ဖို့လာတောင်းတာကို ငြင်းလိုက်တဲ့ မိန်းကလေးကို ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့တာ တရားမှုလား/ မတရားမှု လား စဉ်းစားကြည့်ပါ။
မိဘတွေ မှာ ဒီအတိုင်း ကြည့်နေရတာ။
အဲဒီမိန်းကလေးဟာ ကိုယ့်သမီးလေး၊ ကိုယ့်နှမလေး ဆို ဘယ်လို သဘောထားမလဲ။
သူ့ စိတ်ဆန္ဒ ကို ဖော်ပြခွင့်မရှိရဘူးလား။
ဒီလို ဘာသာရေး နဲ့ အကြောင်းပြပြီး လူတွေ ကို နှိပ်ကွပ်ရင် ဘယ်ဘာသာကို မဆို ကျွန်မ အနေနဲ့ အပြင်းအထန် ရှုံ့ချ ပါတယ်။
ကို areno areno ရဲ့ သဘောထား ကရော ဘယ်လိုလဲ။
ပြန်ဆွေးနွေး နိုင်ရင် ကျွန်မတို့ လဲ ဗဟုသုတ ရတာပေါ့။
—ဒီလို့ဆိုတော့လဲ သစ္စာလေးပါကိုလဲအမှန်တရားထဲထည့်ထားတော့ အမှန်တရားဟာတစ်ခုတည်းဆိုတာ
—သေလွန်ပြီးအဖြစ်ပျက်တွေက အမှန်တရားတွေလဲရှိပါတယ်၊ ။ကိုယ်မျက်စိနဲ့မြင်မမြင်နိုင်တဲ့အမှန်တ၇ား
ကိစ္စတိုင်းဟာ အကျိုးရှိလို့ အကြောင်းဆိုတာရှိလာတာပါ
ရခိုင်အရေးအခင်းမှာလဲ ဘာသာရေးအကြောင်းပြပြီးဖိနှိပ်တာကို ရှုံချပါတယ်လို့ ပြောတာမကြားဘူး
ပါလားကွယ်၊အဖကန်နစ်စတန်ဆိုတာ တစ်ချိန်က အိန္နိယ ။ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနေတဲ့နေရာကွယ်၊
သူတို့အိန္နိယမှ ငယ်ငယ်ကဘဲ ပေးစားတာတို့၊လူကြီးစကားနားထောင်ခိုင်းတာတို့ရှိတယ်ထင်တယ်ကွယ်
ဒါဘာသာရေးနဲ့မဆိုင်ပါဘူး ။ အစ္စလာမ်ဘာသာမှ ကတော့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သူကိုဘဲယူရတယ်
အမျိုးသမှးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကို လွတ်လပ်စွာဖေါ်ထုတ်ခွင့်ပေးထားတယ်ကွယ်၊ လက်ထပ်ပွဲမှာလဲ
သူသဘောတူကြောင်းအများရှေမှာ မေးပါတယ်၊မကြိုက်ရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ငြင်းရံပါဘဲ၊
အတင်းအားဓမလက်ထပ်ခိုင်းခဲ့ရင် လူကြီးမှာပါ မုဒိန်းမှုကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ဒါဏ်ကျခံရပါတယ်၊
နောက် Green Rose
တုံးတိုက်တိုက်ကြားကိုက်ကိုက် ဆိုတော့ အမှားအမှန်မဝေဖန် မပိုင်ခြားတတ်တဲ့သူဆိုတာ
ပြသနာတိုင်းမှာ ကိစ္စတိုင်းဟာ အကျိုးရှိလို့ အကြောင်းဆိုတာရှိလာတာပါ။
ဒါပေမယ့် အခုကိစ္စမှာ ဘာ့ကြောင့်ဆိုတဲ့ တရားခံရှာတဲ့အလုပ်ကို နောက်မှလုပ်ပြီး ဒဏ်ရာကို အရင်ကုရမှာ ငြိမ်ချမ်းရေးကိုအရင်တည်ဆောက်ရမှာ။
ငြိမ်းချမ်းရေတည်ဆောက်ရမှာဆိုတာ တခုတည်းနဲ့မပြီးဘူး၊အဓိက တရာခံကိုလည်းရှာနိုင်မှပြဿ
နာအေးသွားပြီးငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိနိုင်ပါတယ်၊ကြက်ခြောက်သလို ဟိုမှးမီးရှိုဖို့
တက်လာလို့ ခြောက်လို့ပြန်သွားလိုက် လုပ်လို့မရဘူး၊အရင်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်၊ဒီလူတွေလဲရှိနေတယ်
အခု ပြဿနာရှာဖို့ဘယ်သူလုပ်နေတာလဲ၊သူတို့နေရာက မောင်းထုတ်ဖို့ဘယ်သူလုပ်နေတာလဲ
ဒီတရာခံကိုရှာ ပြီး မှ ငြိမ်းချမ်းရေရမှာ၊သောင်းကျန်းနေသူကို ဖမ်းလိုက်မှ အေးသွားမှာ
– ကိုယ်မြင်တာက မောင်ရင်တို့လို့ အမှားအမှန်မတွေးတောနိုင်သူတွေကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာမဟုတ်
ငြိမ်းချမ်းအောင် မကြိုးစားရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အဟန့်အတားဖြစ်စေရင် အဲဒီ့လူဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ မခံယူသင့်ပါဘူး။ တဲ့လား၊
–မောင်ရင်ကိုယ်တိုင် အမှားအမှန်မဝေခွဲနိုင်တော့ မောင်ရင်ကိုယ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံသားမဖြစ်သေးပါဘူး
လူဆိုရင် လူသာူကျင့်ဝတ်သိရတယ်၊အမှားအမှန်ခွဲခြားနိုင်ရတယ်၊ အတွေးအခေါ်ရင့်ကျက်ရတယ်
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် လင်မယား နှစ်ဦးက လူငယ် အမျိုးသား တစ်ဦးအား ကြည့်မိသည့်အတွက် သမီးဖြစ်သူအား သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အသက်(၁၅)နှစ်အရွယ် သမီးဖြစ်သူသည် အက်ဆစ်ဖြင့် အလောင်းခံရပြီး သေဆုံးသွားကြောင်း သိရှိရသည်။ ဆိုတာ မောင်ရင်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားအမျိုးအနွယ်တွေကွယ်၊ သေသေချာချာလေ့လာပေါ့၊ပါကိစ္စတန်ဆို
။ပြီးတောဘုရားအမျိုးတွေနေတဲ့နေရာကွ ။အဲဒီလိုရေးယုံနဲ့ယုံတဲ့ သူကတော့ လူမဟုတ်သေးဘူကွ
ဟယ်…areno areno က သစ္စာလေးပါလည်း ဖြီးတတ်၊ ဘုရားအကြောင်းတွေလည်းသိ
ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လေးထင်ပါရဲ့ ။ ဟုတ်လားဟင်။ Malala လေးဟာလည်း ဘုရားမျိုးလားဟင်(မသိလို့မေးတာနော်)။ ဒါကြောင့်သေနတ်ကြီးနဲ့ မောင်ရင့်ဘိုးတော်ကြီးက ပစ်လိုက်တာထင်ပါရဲ့နော်။ တစ်ခြားဟာတွေတော့ပြောမနေတော့ဘူး ဘာမှ အဓပ္ပါယ်မရှိတဲ့ ချေပမှုတွေ။ ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဟာလေး သဘောကျလို့ “မောင်ရင်သိက္ခာချလို့လဲအစ္စလာမ်ဘာသာသိက္ခာမကျဘူးကွ၊”
-အဲ..သူသိက္ခာမချခင် ခင်ဗျားသူများတွေကို ဒီပို့စ်မှာ သူ့ကိုဆဲဆိုနေတာနဲ့တင် ခင်ဗျားသိက္ခာတော်တော်လေး ကျနေတာတော့ အမှန်ပဲဗျာ။ ဒါအစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ အဲဒီဘာသာနဲ့ ခင်ဗျားနဲ့ရော ကိုက်ညီရဲ့လားဗျာ။ တန်ရာတန်ရာမှန်းမှပေါ့ဗျာ။ ဒါပေသိ..ခင်ဗျားက ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြောင်းလေးတွေတီးမိခေါက်မိရှိတာပဲ နဲနဲစမ်းပီးလေ့လာကြည့်ပါလားဗျာ။(ဟဲဟဲ..ကြော်ငြာဝင်တယ်လို့ မထင်ကြပါနဲ့)
အော်..အရီးရယ်။ ကျားကိုများ မမြဲခြင်းတရားဟောနေပြန်ပြီ။ သူက အမြဲရှိခြင်းကို ကိုးကွယ်သူဆိုဘယ်နှယ်လုပ်ပါ့?
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် လင်မယား နှစ်ဦးက လူငယ် အမျိုးသား တစ်ဦးအား ကြည့်မိသည့်အတွက် သမီးဖြစ်သူအား သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အသက်(၁၅)နှစ်အရွယ် သမီးဖြစ်သူသည် အက်ဆစ်ဖြင့် အလောင်းခံရပြီး သေဆုံးသွားကြောင်း သိရှိရသည်။ သူမသည် လူငယ် တစ်ဦးအား ကြည့်မိ သဖြင့်— အပြည့်အစုံကိုhttp://www.thithtoolwin.net/2012/11/planet-myanmar-network-11-7-12.html
မှတ်ချက်။ ။ ဘာသာရေးထိခိုက်မှုဖြစ်စေသည်။
မုတ်ဆိတ် လုပ်ပါအုံးကွ လဘက်ရည်တခွက် ချိုဆိမ့်…
သြော်.. ငါ့နှယ် တုံးလိုက်တာ ဘာသာရေးအဆုံးအမ တစ်ခုခုများလားလို့ ၀င်ဖတ်မိတာ။ ခုတော့ ဘာသာရေးဝေါဟာရတစ်ခုကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ခြိမ်းခြောက်ထားတာပါလား။ စာရေးသူရဲ့ ရှေ့က တင်ခဲ့ပြီးတဲ့ ပို့စ်တွေကို ပြန်ဖတ်မိတော့မှ နည်းနည်း သဘောပေါက်သွားတာ။
Green Rose ကတော့ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်လို့ လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်၊ မမှန်ဘူးထင်ပေမယ့်လည်း လုပ်ချင်လို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်၊ အမှန်အမှားမသိပဲ လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ် အားလုံးအတွက် ပြန်လည်ခံစားရမယ်ဆိုရင် ဘယ်အချိန်လည်မှန်း မသိတဲ့ဝဋ့်မပြောနဲ့ ရှေ့မှာမြင်နေရတဲ့အန္တရာယ်ဆိုရင်တောင် မကြောက်တတ်ဘူး။
ပြသနာတိုင်းမှာ ကိစ္စတိုင်းဟာ အကျိုးရှိလို့ အကြောင်းဆိုတာရှိလာတာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုကိစ္စမှာ ဘာ့ကြောင့်ဆိုတဲ့ တရားခံရှာတဲ့အလုပ်ကို နောက်မှလုပ်ပြီး ဒဏ်ရာကို အရင်ကုရမှာ ငြိမ်ချမ်းရေးကိုအရင်တည်ဆောက်ရမှာ။ အခုလိုဆိုရင်တော့ ဒီဒေသ ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။ areno areno လိုလူမျိုးတွေ ရှိနေသရွေ့ မငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ငြိမ်းချမ်းမှုကို လိုလားရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှာရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်နေထိုင်ရာ တိုင်းပြည်လို့ သတ်မှတ်လျှင် တိုင်းပြည်အကျိုးကို ကြည့်ရပါမယ်။ အခု ပြသနာပေါင်းစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အချိန်မှာ ရခိုင်ဒေသဟာလည်း တိုင်းပြည်ကို နောက်ပြန်ဆွဲမည့် ပြသနာတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ငြိမ်းချမ်းအောင် မကြိုးစားရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အဟန့်အတားဖြစ်စေရင် အဲဒီ့လူဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ မခံယူသင့်ပါဘူး။
နင်ငါ့ကို ဆဲလို့ မော်ဒရေတာကနေ ဖျက်လိုက်ရတဲ့ ကွန်မန့်ထဲမှာ ဘယ်လိုရေးထားလဲ ပြန်ကြည့်ပါအုံးကွယ်။ နင်ဘာသာရေးကို အသုံးချ မွတ်စလိမ်အကျင့် ကျင့်လို့ငါ့က နင်တို့အမျိုးတွေဆီမှာလည်း သဘာဝဘေး၊ လူလုပ်ဘေးတွေ ရှိကြောင်း အထောက်အထားနဲ့ပြတာပါ။
areno areno via ip.secureserver.net
သဘာဝ(ကံတရား)ကပေးတဲ့အပြစ်ဒါဏ်နဲ့။မတော်တဆလူလုပ်လို့ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စရောချလို့မရဘူးဆိုတာကိုတောင်နားမလည်းတဲ့ချီးစားတဲ့အကောင်လား၊ဒီလောက် မင်းတိုက မခွဲခြားတတ်ဘူးလား၊မကောင်းတာဘယ်လောက်လုပ်တာကြောင့်ကံတရား
ကချပေးတဲ့အပြစ်ကို ခွဲခြားမြင်တတ်ဖို့လို့တယ်၊မင်းတို့ ပါးစပ်မှလီးတပ်ထားတာလဲ ဒီကံတရားကြောင့်ဘဲ
ဒီလောက် မြေငလျှင်လုပ်တာအသိတရားမရသေးဘူးလား မအေလို့းအမျိုးယုတ်ရေ
မင်းတို့ဝဋ်လိုက်နေတာ တရားသဘောနဲ့မြင်အောင်ကြည့် ။မင်းကဘယ်နားလည်မလဲ မင်းတို့ကုလားဘုရား
အခုခင်ဗျားတို့ကို (အထူးသဖြင့် ခင်ဗျားလို ကောင်တွေကြောင့်) အစ္စလိမ်ဘာသာကို မြန်မာတွေက
ပိုပိုသောက်ညင်ကပ်လာရတာပါ။အဲဂဒါ ခင်ဗျားပြောတဲ့ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်လာရတာပါပဲ။
အဲလောက်တောင်နားမလည်ပဲ ဝဋ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမပြောနဲ့ဗျာ။ကြားရတာ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲ
ခင်ဗျား သိပ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ထင်တဲ့ ဘာသာတရားထွန်းကားရာ ကြိုက်ရာနိုင်ငံကိုထွက်သွားနှိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ ဘာသာစကားကိုလဲပြောနှိုင်ပါတယ်…အဲဒီက စာကိုလဲရေးနှိုင်ပါတယ်။အတူတူသွားရောက်ယှဉ်တွဲ
ကျုပ်က မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းလဲ ခင်ဗျားထက်ပိုပြောတတ်တယ်။ခင်ဗျားဘာသာက သောက်တလွဲတွေကိုလဲ
ကြိုက်သလိုပြန်ငြင်းခွင့်လဲပေးပါ့မယ်။သဂျီးကိုအားနာတာကြောင့်အေးအေးနေတာ ခင်ဗျားတို့ဘက်ကလာမစပါနဲ့။ကျုပ်နဲ့ အေးအေးလဲရှင်းချင်ရင်ခင်ဗျား(မမိုက်ရိုင်းရင်)ရှင်းလို့ရတယ်။
မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ရှင်းချင်လဲရတယ်။ကျုပ်ကို ကိုကြောင်ကြီးကိုဆဲသလို သတ္တိရှိရင်ဆဲကြည့်စမ်းဗျာ။
မင်းတို့ဝဋ်ဆိုတာမသိကြလို့ရေးပေးတာကွ၊ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲကုလားဒိန်ဝင်စရာမလို့ဘူးကွ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းကကုလားကျောင်းဘဲ၊ကုလားကြီး ကစင်ပေါ်မှာစောင့်နေပြီးသားဘဲ၊မြန်မာမှုမပြုပါနဲ့၊ ကုလားအ၀တ်အစားနဲ့ကိုမြန်မာလို့ဝတ်ပြီး မြန်မာမှုပြုကြည့်ပါလား၊ဆိုနေတဲ့စာကာလဲကုလားစာပါ ဘဲမောင်ရင်ရေ၊့ cat ကို ကတ်လို့ရေးရုံနဲ့မြန်မာစာမဟုတ်ဘူးမောင်ရင်ရေ၊ မြန်မာစာဆိုတာ ဘယ်က ဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာသေသေချာချာကြည့်ပါကွ၊ကျုပ်ရေးတာအမှန်
ထင်နေလို့လား၊ မင်းတို့ လွတ်လပ်ရေးရအောင် တိုက်ပွဲဝင်တုန်းက ထမီအောက်ဝင်နေကြတာကို သတိရ
ကြ။ ဒါငါတို့ တိုင်းပြည်ကွ၊မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ တိုင်ရင်းသားပေါင်းစုံပိုင်ဆိုင်တယ်၊စု့စည်းနေထိုင်နေကြတာ၊
သမိုင်းကိုသေသေချာချာကြည့်အုံး၊ မသိရင် ငါတို့ပုဂံကို လာကြည့်၊ အစောဆုံးဘုရင်တွေ၊မူးမတ်တွေ
ရဲ့ မုတ်ဆိတ်တွေ၊ဒိုတီတွေနဲ့ မင်းတို့ ဆင်းသက်လာတဲံအနွယ်ကို သိရအောင်၊ မဟုတ်ရင် ကိုယ်
ငါကမင်းတို့လို့မိမဆုံးမ။ဖမဆုံးမသားသမီးတွေမဟုတ်လို့မဆဲတော့ဘူးကွ၊ ကြောင်ချီးကအရင်စဆဲတယ်ဆိုတာသူပိုစ်မှဖတ်ကြည့် ၊ ဆဲလို့ကတော့မအေနှမကိုင်တုတ်ပစ်လို့မှာဘဲ
ငရင် areno arenoရေ…..
သိပ်ဆဲချင်နေသပဆိုလဲ (သို့) မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းပြောချင်နေသပဆိုလဲ ဇရှိရင်ကျုပ်ပေးထားတဲ့
ဒီလင့်တွေကိုကြွခဲ့ပါ။ဒီဂေဇက်က အဆင့်ရှိတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေကြောင့် ကျုပ်ကလဲမဆဲပါဘူးဗျ။
ဒါကို ကုလားတိုင်းပြည်လို့ပြောရက်လောက်အာင်ကို အသိညာဏ်ပညာခေါင်းပါးလွန်းလှတယ်။
အသက်စွန့်တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့မျိုးချစ် ဗမာအပါအဝင် တိုင်းရင်းသား(ကုလားမပါ)တွေဒီလောက်များတာတောင်မင်းမသိတာ အံ့ပါရဲ့ ကွယ်။
လုပ်စမ်းပါဦး အင်္ဂလိပ်ကို တော်လှန်ခဲ့တဲ့ မင်းတို့အစ္စလိမ်ကုလားတွေကိုပြောပြစမ်းပါဦးးး
သီပေါမင်းပါတော်မူပြီးကတည်းက ခုခံတွန်းလှန်တဲ့အထဲ မင်းတို့အမျိုးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပေါ်ထွက်ခဲ့လို့လား။
နောက်တစ်ခုက မင်းကိုငါသိပ်ဆဲချင်နေပြီကွာ ဒီတော့ ငါပေးတဲ့လင့်သာလာပြီး
ငါ့ကို မအေနှမလာကိုင်တုတ်စမ်းပါစောင့်နေတယ် areno arenoရေ…..
အမြန်သာ join group ကိုသတ္တိရင်လုပ်လိုက်စမ်းဘာာာာာာာာာာာာာာာာ
ဟဲဟဲ..ကိုယ့်ကိုကိုယ် အစိမ်းသုတ်တဲ့ ပို့စ်ရေးသူကတော့ ဒီတစ်ခေါက်ပဲမြင်ဘူးသေးတယ်။ ဖေ့ဘွတ်မှာတော့ ကို့ပို့စ်ကို like လုပ်ရင် ငပေါလို့ပြောလေ့ရှိကြတယ်။
အစိမ်းသုတ်တာမသုတ်တာက သူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်မို့ မပြောလိုပါဘူး
အဲကောင်ဘာမှလဲဝင်မပြောပါပဲလား။ဒီနေ့(၅၀)ကျော်လက်ခံထားတဲ့အထဲ အဲကောင်ပါမပါမသိဘူးဗျ။မန်းလေးဂေဇက်မှာက ကျွန်တော်လေးစားတဲ့သူတွေရှိနေလို့ဘာမှမဆဲတာပါ။
သူက စစော်ကားထားလို့ပါဗျ။သဂျီးဖျက်တဲ့ ကျွန်တော့ကွန်မန့်ထဲမှာလဲ မိုက်ရိုင်းတာတစ်ခုမှမပါပါဘူးဗျာ။
မမိုက်ရိုင်းရင် ကျွန်တော်ကလဲမမိုက်ရိုင်းပါဘူးဗျာ…သိပ်မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းပြောချင်နေရင်လဲ ဒီဂရုကိုလာခဲ့
” အမျိုးသားတစ်ဦးကို ကြည့်မိသည့် သမီးဖြစ်သူအား မိဘများက သတ်ဖြတ် ”
” မောင်ရင်တို့ ဗုဒ္ဓဘုရား အမျိုးအနွယ်တွေ ကွယ် ။
ပြီးတော့ ဘုရားအမျိုးတွေ နေတဲ့နေရာ ကွ ။
မောင်ရင် သိက္ခာချလို့လဲ အစ္စလာမ် ဘာသာ သိက္ခာ မကျဘူးကွ ”
ကို areno areno ပေးတဲ့ ၊
သတင်း နှင့် သတင်းအပေါ် ကောက်ယူချက် ၊
နဲနဲ လွဲ နေတယ်ထင်လို့ ဝင်ရှင်းပြတာပါ ။
ဦးကြောင် ၊ အကြောင်းပြန်ထားပေမယ့် ၊
သူ့ဟာ ကလည်း သစ်ထူးလွင်ဖြစ်နေလို့ ၊
ပိုခိုင်လုံတဲ့ မူရင်း သတင်း Link တွေကို တင်ပေးတာပါ ။
အဓိက အချက်တွေကတော့ ။
ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ ၊ ကက်ရှမီးယား ဒေသ မှာ ၊
သမီးဖြစ်သူက ဆိုင်ကယ် နှင့် ဖြတ်သွားတဲ့ ၊
ကောင်လေးကို ကြည့်မိတဲ့ အတွက် ၊
မိသားစု ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်တယ် ဆိုပြီး ၊
မိဘတွေက ရိုက်နှက် ၊ အက်ဆစ်လောင်း လို့ ၊
သမီး သေသွားတာပါ ။
မိဘတွေ နာမည် က ၊
” မိုဟာမက် ဇဖါး ” နှင့် ” ဇဟီး န် ” ပါ ။
သမီး နာမည် က ၊
” အနုရှား ” ပါ ။
ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါ။ မွတ်ကုလားတွေအားလုံးကို ကျုပ်မစော်ကားပါဘူး။
မွတ်ကုလားတွေထဲမှာ တကယ်စိတ်ထားကောင်းတဲ့ (ရှိတော့ရှိတယ် ရှားတယ်ပေါ့လေ)
သူတွေရှိမှာပါ။ သူတို့တွေကိုတော့ မဆဲချင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ခက်တာက တော်တော်များများ
မိုက်ရိုင်းတဲ့ကောင်တွေချည်းပဲ။ ပြောရင်လည်း လက်မခံဘူး။ ကမ္ဘာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့
မတည့်တဲ့ဘာသာဆိုတာမရှိသလောာ်ပါ။ ဘယ်တုန်းက ခရစ်ယဉ်တွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ
ဆဲခဲ့ဖူးပါသလဲ။ ဘာသာရေးစစ်ပွဲတွေကို ဘယ်ဘာသာက ဆင်နွဲနေသလဲ။
Peace of Religion ဆိုပြီး ဘာကြောက့်အသေခံ ဗုံးခွဲကြတာလဲ။ သူတို့ဘာသာကို
နည်းနည်းမှ အထိမခံ ကမ္ဘာတစ်လွား ဗုံခွဲမယ်ဆိုတာက ငြိမ်းချမ်းရေးလား။ ကမ္ဘာမှာ
ကြည့်လိုက်ပါ။ ထစ်ခနဲ့ဆို မွတ်ကုလားတွေက ဘာကြောင့် သည်းခံမူစိတ် နည်းနည်းလေးမှ
မထားဘဲနဲ့ အကြမ်းဖက်ချင်ရတာလဲ။ တကယ်လို့ မွတ်တွေသာ နည်းနည်းပါးပါး
သည်းခံမှုသာ ရှိမယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက အားအားယားယား စော်ကားချင်စိတ်ရှိမှာမဟုတ်ပါ။ တိုင်းပြည်မှာ ခရစ်ယဉ်ဘာသာတွေနဲ့ ပြသနာဖြစ်တာ တွေ့ရခဲတယ်ဆိုတာ သတိမပြုမိဘူးလား။ လား…လား..
မေးခွန်းတွေ များစွာကို တကယ် ကျကျနနဖြေရှင်းပေးမယ့်သူတွေရှိရင် ကောင်းမယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ ဆက်မိုက်နေရင်တော့…..